२०७५ फागुन ३० बिहीबार २१:३६:००
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूहले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वकै सफायाको योजना बनाएका गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपरेको बिफ्रिङ सचिवालयका नेतालाई गरेका छन् ।
एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को कम्युनिस्ट विचारधारामा आस्था र विश्वास राख्ने समूहको गतिविधिमा अंकुश लगाएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि झाँगिन थालेपछि शीर्ष नेतालाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले विध्वंसात्मक गतिविधिदेखि ‘सेबोटेज’ गर्नेसम्मको सुराक मिलेको बताएका हुन् । र, त्यसैको आधारमा विप्लवका गतिविधि नियन्त्रण गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
बिनाकारण पार्टी एकता लम्बिएको, पार्टीसँग सल्लाह नगरी सीके राउतसँग सम्झौता र विप्लव समूहको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको भन्दै बुधबार चार सचिवालय सदस्य पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेर असन्तुष्टि राखेका थिए ।
सरकारका निर्णयप्रति पार्टीका नेता नै असन्तुष्ट बन्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेतृत्वलाई बालुवाटार बोलाएर विप्लव समूहको प्रतिबन्धबारे समान धारणा बनाउने प्रयास गरेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।
“विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयप्रति हामी सबैको एउटै मत छ,” बालुवाटार बैठकपछि सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले बाह्रखरीसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै भने, “उनीहरू अपराधी ग्याङ् हुन् । प्रतिबन्ध लगाउनु जायज छ ।”
खनालले विप्लव समूहले नेताहरूको एकपछि अर्को गरी, शृंखलावद्ध हत्या गर्ने भनेर निर्णय नै गरेको भन्दै दृढतापूर्वक अपराध नियन्त्रण गर्नुबाहेक राज्यसँग अरू कुनै विकल्प नभएको बताए । उनले यसअघि नै विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताउँदै सरकारले ढिला काम गरेको बताए ।
“अपराधी होइनन् भन्ने तर्क गर्न उनीहरूले कुनचाहिँ राम्रो गरेका छन् ? उनीहरूले गरेको कुनचाहिँ कामको जनताले समर्थन गरेका छन् ?,” खनालको प्रश्न थियो ।
खनालले एकाध नेताले पार्टीसँग सल्लाह गरेर निर्णय गरेको भए अपनत्व बोध हुन्थ्यो भन्ने लागेको भए पनि विप्लवका गतिविधिमाथिको नियन्त्रणमा कुनै मतमतान्तर नभएको प्रष्ट पारेका छन् ।
अनुहार जोगाउँदै पूर्व माओवादी केन्द्र
विप्लवको गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारको निर्णयले पूर्व माओवादी केन्द्रलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले प्रतिबन्ध समाधान नभएको जिकिर गरेका छन् । “प्रतिबन्ध समाधान होइन, बम पड्काउनु त झन् समाधान हुँदै होइन, संविधानभित्रै मत, जनमत र अभिमतमार्फत समाधन खोजौँ,” जनार्दनको तर्क छ ।
विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्धले पूर्व माओवादी केन्द्रभित्र बिबाद उत्पन्न हुने र सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने भयले सरकारले सेबोटेजको त्रास देखाएको नेकपाका नेता बताउँछन् ।
बिहीबार पेरिसडाँडामा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले विप्लव समूहले व्यक्ति हत्याको योजना बनाएको बताउँदै पहिलो नम्बरमा आफैँलाई राखेको बताए । “पछिल्लो चरण मेरो कार्यालयको सचिव भएर बसेका विप्लवहरूले प्रचण्डलाई नै एक नम्बरमा मार्नुपर्छ भनेर माइन्युट गरेका छन् रे ! मार्न मान्छे पनि खटाएको कुरा सरकारकातर्फबाट जानकारी गराइयो । मलाई यो सुन्दा दया लागेको छ,” प्रचण्डको भनाइ थियो ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले विप्लवमाथि प्रतिवन्ध नलगाइएको र उनीहरूका गतिविधि संविधानले नै निषेध गरेको जिकिर गर्छन् ।
बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा श्रेष्ठले प्रश्न गरे– “सरकारले कहाँ भनेको छ, विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भनेर ? उनीहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्नेमात्रै भनेको हो ।”
उनले संविधान, ऐन, कानुन प्रतिकुल काम गर्न कसैलाई छुट नभएको र सरकारले त्यसको नियन्त्रण गर्ने कुरा बताए ।